600Lbs mkpọchi otu ọnụ ụzọ nwere nnukwu ndị na -emepụta LED na ndị na -eweta ya - YLI ELECTRONICï¼ˆASIAï¼ ‰ LTD
Ulo > Mkpọchi Magnetik > Mkpọchi Magnetic 600Lbs > Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs nwere nnukwu LED
Mkpọchi ọnụ ụzọ Magnetik 600Lbs nwere nnukwu LED
Nke a bụ otu mkpọchi eletriki bụ maka ọnụ ụzọ iko, ọnụ ụzọ osisi, ọnụ ụzọ ọkụ, ọnụ ụzọ na -amị amị na ọnụ ụzọ igwe. Ike ijide bụ 600lbs. Inbuilt kọntaktị akpọchiri mkpọpụta ọkwa akara ngosi (NO, NC, COM). Ọ bụ na ihe dị ike, ụlọ anodized aluminom.
Ihe mmetụta mkpọchi mkpọchi (NO/NC/COM).
Nha 255Lx48.8Wx27.9H (mm)
Mmepụta mgbaama Mkpọchi mkpọchi (NO/NC/COM)
Mkpọchi Emecha Zinc
Armature efere n'isi Zinc
Tags na-ekpo ọkụ: Mkpọchi ọnụ ụlọ Magnetik 600Lbs nwere nnukwu LED, ndị na -emepụta ihe, ndị na -ebubata ya, ụlọ ọrụ, ahaziri ya, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ego, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta, CE, ISO9001, Ogo